စက္ဘီးႏွင့္တိုက္မိေသာ ၾကက္ေလးကို ေဆးကုသဖို႔ ေဆး႐ုံသို႔ယူေဆာင္လာတဲ့ ေကာင္ေလး နာမည္ႀကီးေန - Barnyar Barnyar
Credit:CNJ ( Chin News Journal)
စက်ဘီးနှင့်တိုက်မိသော ကြက်လေးကို ဆေးကုသဖို့ ဆေးရုံသို့ယူဆောင်လာတဲ့ ကောင်လေး နာမည်ကြီးနေ
ချင်းပြည်နယ်နှင့် နယ်စပ်ချင်းထိဆက်သည့် မိဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်က စက်ဘီးနှင့် ကြက်ကလေးကိုတိုက်မိပြီး ဆေးကုသပေးဖို့ အဆိုပါကြက်ကလေးကို အိန္ဒိယငွေ Rs. ၁၀ ကျပ်နဲ့ ဆေးရုံသို့သွားပြခဲ့ပါတယ်။
ဤအဖြစ်ပျက်ကို Sanga ဟုခေါ်သော ဆေးရုံသူနာပြုဝန်ထမ်းတစ်ဦးက Facebook မှာတင်တဲ့အခါမှာ ကလေးငယ်လေးရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားလွန်းတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို လူအများအပြားကချီးကြူးကြပြီး မီဇိုရမ်အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။
တိုက်မိတဲ့ကြက်ကလေးကို Rs. ၁၀ ကျပ်နဲ့ ဆေးရုံသို့သွားပြခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ မိဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ ဆိုင်ရန်မြို့မှာ ရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ Dhiraj Chhetri ရဲ့သားငယ် Derek C. Lalchhanhima ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ရဲ့ဖခင် Dhiraj Chhetri က “သူတိုက်မိတဲ့ ကြက်ကလေးကိုအိမ်ကို ယူလာပြီး ဆေးရုံသို့ပြပေးပါလို့ အဖေနဲ့အမေကို လာပြောတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း Rs. ၁၀ ကျပ်ပေးပြီး သူကိုယ်တိုင်သွားပြဖို့လွှတ်လိုက်တယ်။ ဆေးရုံကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာ ကလေးကငိုနေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံသာရိုက်ပြီး ကြက်ကလေးကို ကုမပေးဘူးလို့ ငိုယူပြီးပြောနေတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ကြက်ကလေးဟာ သေသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာဝန်တွေကလည်း ကူညီလို့မရတော့ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ဤအဖြစ်ပျက်ကို Facebook မှာတင်တဲ့သူ Sanga ကိုလည်း လူအများအပြားက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းခံရတဲ့အပြင် ဖြူစင်ရိုးသားလွန်းတဲ့ကလေးငယ်လေးရဲ့အကြောင်းကို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇှုုးတင်ကြောင်း စာတွေပို့ကြပါတယ်။
“ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့အကြောင်းကို လူအများသိအောင်တင်ခွင့်ရတာ ကျနော်တကယ်ဝမ်းသာမိတယ်။ ကာယာကံရှင်ကလေးငယ်နှင့် သူ့မိဘတွေကို ကျနော် Credit အားလုံးပေးပါတယ်” လို့ Sanga က The Voice of Northeast သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။
အရက္မ်ားကို ေခ်ာင္းထဲသြန္ခ်၍ အရက္ေရာင္းခ်ေသာက္သံုးခြင့္ ရာသက္ပန္ ပိတ္ပင္တဲ့ ရြာကေလး